Faly ny vondrona media ao Filipina fa nilaza ny hiaro ny fahalalahan-gazety ny orinasan-teknolojia voampanga ho nanao fanafihana an-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Niatrika fitoriana ny IP Converge sy ny Suniway noho ny fanafihana DDoS
Voadika ny 14 Marsa 2020 8:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Português, Español, English
Mpikambana ao amin'ny Altermidya sy ireo vondrona fampitam-baovao hafa nandritra ny fametrahana fitoriana ara-pitsarana ireo orinasan-teknolojia voampanga ho nanao fanafihana an-tserasera. Loharano: Facebook
Vondrona fampitam-baovao maro no nametraka fitoriana ireo orinasan-teknolojia voampanga ho manome sehatra ahafahana manao fanafihana an-tserasera. Efa nanasonia fifanarahana ahitana filazana hiaro ny fahalalahan-gazety ireo orinasa ireo.
Tamin'ny Desambra 2018 ireo tranonkalam-baovao mahaleotena Bulatlat, Altermidya, Kodao, ary ny Pinoy Weekly no nitatitra [mg] fa lasibatry ny fanafihana (DDoS) ry zareo. Ampangain-dry zareo ny vondrona tohanan'ny fanjakana ho niaingan'izany fanafihana izay lazainy fa natao hanindriana sy hampangina ny vondrona fampitam-baovao izany. Nampifandraisin-dry zareo ny fikatonan'ny tranonkalan-dry zareo vokatry ny fanafihana sy ny fitotongan'ny fahalalaham-pitenenana nandritra ny governemantan'i Rodrigo Duterte izay lasa filoha tamin'ny taona 2016.
Qurium, orina mpanasoa media miorina ao Soeda, no nanampy tamin'ny fampitsaharana ny DDoS sy ny famantarana ny orinasan-teknolojia IP Converge sy Suniway ho niavian'ny fanafihana an-tserasera. Ny IP Converge dia Mpanome servisy Cloud miorina ao Filipina, raha manolotra “fanohanan-tambajotra ho an'ireo orinasa shinoa sy filipino ao Filipina’’ kosa ny Suniway Group avy ao amin'ny Companies Incorporated, izay samy voasoratra ao Hong Kong sy ao Filipina.
Tamin'ny marsa 2019, nisy fitoriana ady madio napetrak'ireo tranonkalam-baovao tratran'ny fahirano tamin'ny IP Converge sy Suniway.
Notohan'ny Sendikà Nasionalin'ny Mpanora-gazety ao Filipina ny famenoana ny fitoriana:
Mandefa hafatra mazava ho an'ireo mitady hampangina ny fampitam-baovao mahaleotena ao Filipina izao hetsika ara-pitsarana izao: tsy hoe tsy nahomby ihany ianareo, fa hamaly izahay. Hamaly izahay satria tsy ho avelanay ho esorinareo ny zon'ny vahoaka hahalala ny vaovao ilainy mba hizorany mankany amin'ny hoaviny tsirairay sy iraisana, tsy ho avelanay ho esorinareo ny feon-dry zareo. Hamaly izahay satria tsy ny demaokrasia sy ny fahalalahana fototra ihany no mikatso.
Tsipahin'ireo orinasa ny filazana ary dia nametraka fitoriana ireo nitory ireo mpiampanga azy ireo ho manimba ny lazany koa ry zareo.
Nandritra ny kaoferansa mialoha ny fitsarana tamin'ny Septambra, nanaiky ny IP Converge fa namoaka adiresy IP miisa 64 ho an'ny Suniway, izay notsongoin'ny Quirium ho niavian'ny fanafihana.
Tamin'ny In Febroary 2020, nivaha tamin'ny alalan'ny fanehoan'ny ankolafy rehetra andraikitra hiaro ny fahalalahan-gazety ny raharaha. Indro ny tsonga avy amin'ny fanambaràna iombonana nataon-dry zareo nivoaka tamin'ny 24 Febroary:
Ambaran'[ny andaniny sy ankilany] ny fanajany tanteraka sy ny fanohanany feno ny fahalalaham-pitenenana ho fiantohan'ny lalampanorenana sy hevitra fototry ny fiarahamonina demaokratika… [ireo] voampanga hiadidy hiaro ny gazety afaka. Hohatsaraina ny fomba fiasa hiadiana amin'ny fanafihana tahaka itony hisorohana amin'ny fiverenan'ny toe-javatra tahaka izao.
Namoaka fanambaràna mamariparitra ny vokany ho fandresen'ny fahalalahan'ny gazety ny Bulatlat:
Fandresena kely izao ao amin'ny tolona ataonay ho amin'ny fahalalahan'ny gazety. Miantso ny orinasan-teknolojia rehetra izahay tsy hamela ny fotodrafitrasany ho ampiasain'ny fahavalon'ny fahamarinana.
Mbola ho mailo izahay amin'ny fanoherana ny fanafihana an-tserasera sy ireo endrika fanitsakitsahana ny zonay hafa hamoaka vaovao sy hanao fanadihadiana mifandraika amin'ny vahoaka Filipino.
Tao amin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Global Voices i Ronalyn Olea, tonian'ny Butlatlat nanondro ny fifandraisan'ny raharaha amin'ny fanentanana iadiana amin'ny fanafihana antserasera mifandraika amin'ny fampitam-baovao.
Ity raharaha ady madio napetraky ny vondrona fampitam-baovao mahasolo ity no raharaha voalohany mifandraika amin'ny fanafihana antserasera nihatra tamin'ny fampitam-baovao. Nanonona ny adidiny hanandratra ny fahalalahangazety sy hiantoka ny fomba fiasa hisorohana ny fotodrafitrasany tsy ho ampiasain'ny fahavalon'ny fahamarinana ireo ankolafy tafiditra amin'ny raharaha. Natao ihany koa ity ho fampitandremana ho an'ireo mpanafika an-tserasera fa tsy ho afaka hiafina ao ambadiky ny VPN mandrakizay ry zareo.
Nampian'i Olea fa manana fanafany ara-pitsarana ry zareo hiantohana ny fanajana ny fisorohana ny fanafihana an-tserasera:
Fifanarahana mampifamatotra ny fifanarahana niraisana ary nametraka izany tamin'ny fitsarana misahana ny raharahanay izahay. Tsy mamatotra ny tananay tsy hametraka fitoriana izy ity raha misy indray ny tranga mitovitovy amin'izao.
“Endrika iray amin'ny fanentanana fotsiny ny fitoriana eny amin'ny fitsarana,’’ hoy i Olea talohan'ny nitenenany hoe:
Nanampy betsaka anay tamin'ny fanentanana hanandratra ny zo hanao famoahana ny fanohanana safononoka avy amin'ireo mpiambina ny fahalalahan-gazety, mpanandra-tenin'ny zo nomerika, mpanora-gazety namana.